XOG MW Farmajo ma wuxuu u dagaalamaya Dimraadiyad mise Kaligii Talis 50 sano Kadib Awooda Sharafta | Allbanaadir Media
Home Warka Maanta XOG MW Farmajo ma wuxuu u dagaalamaya Dimraadiyad mise Kaligii Talis 50...
XOG MW Farmajo ma wuxuu u dagaalamaya Dimraadiyad mise Kaligii Talis 50 sano Kadib Awooda Sharafta
Soomaaliya waxaa ka jira xiisad siyaasadeed oo hadhaysay sanado badan,Siyaasinta isdiidan ayey u afduuban tahay Soomaaliya hada.
Waa wixii lasoo maray dhamaaka mudo xileedkasta oo Dowlada jirta inay timaado cabsi dagaal sababto ah dadka soomaaliyeed waxa kaliya ay ka midaysan yahiin ayaa ah cabsida laga qabo dagaal kale oo soomaaliya ka dhaca.
Hada Siyaasada Soomaaliya waxay iskugu biyo shubanaysaa muran doorasho oo dimraadiyad doon ah iyo mid doorasho dad ban ah,xataa Dowlada waaweyn ee mudo ku dagaalamayey Dimuraadiyada ayaa ku dagaalamaya in doorasho dad ban soomaliya lagu celiyo.
Soomaaliya afar sano oo kasta waxay ku dhamaataa doorasho dad ban,lagamana gudbi karo ilaa loo dhabar adaygo wax kasta oo dhacaya in Soomaaliya lagu riixo doorasho shacab.
Siyaasinta Diidan Doorasho cod shacab ayaa markaasi dagaal afka qoriga u saara taasina waxay ka lifta in looga tanaasulo Doorasho shacab,Tusaale ahaan Dowlada ka horaysey tii Madaxweynaha Xilka Haya ee Farmaajo.
waxay ahayd inay qabato doorasho qof iyo cod balse uma suuro galin wakhtiga ayaa dhamaaday mucaaradka oo xataa uu kujirey Madaxweyne Farmaajo waxay ku cadaadiyeen Xasan sh inuu Doorasho qabto.
Maanta si la Mid ah taasi waa mida haysata madaxweyne Farmaajo.
Hadaba madaxweyne Farmaajo ma wxuu u dagaalamaya dimuraadiyad mise dictoter,waa kuma Madaxweyne Farmaajo…